Famantarana 13 lasa mpinamana be ianao - Fifandraisana
Raha mamaky ny lohatenin'ity lahatsoratra ity ianao ary misy namana iray vao tonga ao an-dohanao dia efa fantatrao fa misy olana.
Isika rehetra dia manoatra noho ny finamanana amin'ny fotoana iray eo amin'ny fiainantsika, na inona na inona fanakaikezana izay nifaneraserantsika tamin'ny lasa.
Raha tsy azonao antoka raha dingana na zavatra tena izy, nahazo famantarana mazava izahay fa azonao ihodinana.
Sarotra ny mahatsapa izany momba ny olona iray izay niahianao fatratra, saingy tsy mila mahatsapa ho meloka ianao - ary hazavainay ny fomba sy ny antony…
1. Tsy malahelo azy ireo ianao.
Angamba ianao efa nandoa vola tamin'ny daty kafe roa na antso tato ho ato ary tsapanao fa tsy mampaninona anao izany!
Mety ho hitanao fa tsy dia malahelo an'io namana io ianao rehefa tsy nahita azy ireo nandritra ny fotoana kelikely, na hoe tsy miezaka mafy mandany fotoana miaraka aminy.
Raha tsy mientanentana intsony ianao hiresaka amin'izy ireo na mieritreritra ny hiantso azy ireo rehefa mahatsiaro ho manirery ianao dia mety nifindra tamin'ny fisakaizana - ary tsy maninona!
wwe vola amin'ny tapakila banky 2017
2. Mandany ny herinao izy ireo.
Mahatsiaro reraka ve ianao rehefa avy mandany fotoana miaraka amin'izy ireo?
Samy mitombo amin'ny fomba samy hafa isika, amin'ny taha hafa, ary mety mandreraka be ny mody milaza fa tsy nitranga ny fitomboana mba hifanaraka amin'ny olon-kafa.
Mety ho hitanao fa lany hery ianao aorian'ny fahitanao ny namanao iray - angamba noho ianao miezaka mafy mamintina ny tenanao hiverina amin'ilay olona fantany aminao.
Ara-dalàna tanteraka izany, saingy tsy dia salama loatra, ary zavatra tokony hodinihina satria mety ho famantarana fa lasa lehibe noho io fisakaizana io ianao.
3. Mihazona anao izy ireo.
Misy namana manandratra antsika ary manosika antsika handroso.
Tian'izy ireo hahatratra ny nofinofinay izahay ary hientanentana amin'ny anarantsika momba ireo dia vaovao izay mety hirosoana!
Misakana anay ny namana hafa.
Mety tsy te hanao izany izy ireo, saingy ataon'izy ireo hahatsapa izahay fa tsy vonona ny hanandrana zava-baovao.
Raha mahatsapa ianao fa misakana anao ny iray amin'ireo namanao ary tsy manohana ny fanapahan-kevitrao, dia angamba famantarana fa tsy eo amin'ny toerana iray intsony ianao ary nifindra tamin'ny fisakaizana.
4. Manamboatra antony hisorohana azy ireo ianao.
Raha manomboka manao fialantsiny ianao hialana amin'ny fihaonana amin'ny namanao na fanahy iniana tsy tadidinao ny antson'izy ireo dia mila mieritreritra izay tena zava-mitranga ianao.
Azo inoana fa nifindra ianao ary tsy te hanaiky azy fotsiny. Tsy te hiresaka amin'izy ireo intsony ianao ary tsy dia liana amin'ny zavatra lazainy.
5. Tsy manana zavatra iraisana ianao.
Mety nifamatotra zavatra iray ianao tamin'ny fotoana voalohany naha-mpinamana, fa, raha tsy nahazo zavatra iraisana intsony ianao dia famantarana fa nitombo tamin'ny lafiny samihafa ianao.
vokatry ny lainga eo amin'ny fifandraisana
Mety nanangana fahalianana vaovao ianao na nanomboka niaraka tamin'ny olona samihafa izay samy manana ny fialam-boliny.
Tsara izany, fa mety hanasongadina ny hakanao kely amin'ny mpiara-mitory aminao intsony!
6. Tsy mitovy hevitra amin'ny sehatra fototra ianao.
Raha tsapanao fa tsy mifanaraka mihitsy ny hevitrao dia saina mena lehibe izany.
Mora ny manakaiky olona iray ary mifantoka amin'izay itovizanao na mahomby amin'ny fahombiazanao, ka izany no tsy dia zarainay aloha ny mizara ny soatoavinay fototra.
Raha mifankahalala bebe kokoa amin'ny namanao ianao ary mahatsapa fa tsy mifanaraka amin'ny soatoavina fototra tena tsara ianao (ohatra ny zon'olombelona sy ny hetsika fanoherana ny fanavakavaham-bolon-koditra) dia mety tsy dia mifanentana loatra amin'ny finamanana maharitra ianao.
7. Mitady namana vaovao foana ianao.
Raha nanomboka nifandray tamin'ny olon-kafa bebe kokoa ianao, ary miezaka ny hahafantatra olona vaovao, dia mety tsy dia misy dikany aminao intsony io fisakaizana io.
Mety maniry karazana angovo vaovao ianao, na te hiaraka amin'ireo olona manao zavatra mitovy aminao.
8. Tsy ho mpinamana ianao raha nihaona izao.
Ankehitriny, tsy marina ho an'ny rehetra izany, fa mety ho fambara fa tsy manompo anao intsony ny fisakaizanao.
Mazava ho azy, maro amintsika no mifamatotra amin'ny tantarantsika miaraka ary mahafinaritra ny fananana namana izay efa teo amin'ny fiainanao hatrizay ary mahalala ny momba anao rehetra.
Nefa, raha nihaona androany ianao, te hifanerasera amin'izy ireo ve ianao mifototra amin'ny hoe iza ianareo izao - tsy hoe iza fotsiny ianao taloha?
9. Mitana lolompo ianao.
Angamba misy zavatra tsy azonao avela fotsiny, na misy tohan-kevitra tsy voavahao tanteraka.
Raha misy zavatra ratsy manantona anao roa dia takatra fa mahatsiaro ho vonona ny hifindra ianao.
Mampalahelo, fa tsy misy dikany ny manohy finamanana raha mandratra be!
Indraindray, tsy maintsy manapaka ny fatiantoka fotsiny isika, manaiky fa niova ny toe-javatra, ary mandroso.
10. Tonga lafatra.
Mety ho ianao irery no manao ezaka ary efa leo ny maha irery anao mihazona ny finamanana.
Mety ho izy ireo foana no manolo-tanana ary tsy dia liana intsony amin'ny finamanana ianao mandritra ny fotoana fohy.
Na izany na tsy izany, raha misy ny raharaha iray-rindrina , famantarana izany fa nifindra tamin'ny sakaizanao ianao - ary mety zavatra tsara izany!
11. Hitanao fa ratsy izy ireo.
Angamba ianao nanomboka nahatsapa fotsiny ohatrinona ny fitarainan'ny namanao - momba ny zava-drehetra!
Mety nanohana teo aloha ianao ary nanandrana nanampy azy ireo hahita ny lafy tsara, na mety nanatevin-daharana azy ireo ianao satria nahatsapa ny zavatra tsapanao.
Na izany na tsy izany, raha mahita azy ireo ratsy be ianao izao, dia efa lehibe - ary nitombo avy ny fisakaizana.
12. Miankina amin'ny vondrona maromaro fotsiny ianao.
Raha najanonao ny mandany fotoana iray miaraka amin'ny namanao, dia mety ho noho ianao nahatsikaritra fa tsy irery ny mahafinaritra azy irery miaraka amin'izy ireo.
Mety ho tafita tsara amin'ny vondrona iray ianao ary hanana namana iraisana marobe, saingy, raha tsy mahita lohahevitra fifampiresahana ianao ary manantona 2, eritrereto izay tena mitazona ny namanao.
ahoana no ahalalanao fa vita io
13. Zavatra samihafa no tadiavin'izy ireo.
Tsy midika akory izany fa ny namanao rehetra dia mila manana kinova fanapahana cookie anao ary maniry zavatra mitovy indrindra…
… Fa manampy kosa ny fananana fiara, fomba fijery ary tanjona kendrena amin'ny fiainana.
Mety ho tsapanao fa te hitety an'izao tontolo izao ianao ary te hijanona ao an-trano izy ireo.
lasa adala ve aho manonona teny alice any Wonderland
Angamba ianao olona mifantoka amin'ny asanao izay miakatra amin'ny tohatra ary faly izy ireo amin'ny asa mitovy aminy nandritra ny 10 taona.
Tsy ny hoe samy 'tsara' na 'ratsy' kokoa noho ny iray hafa ianareo fa tsy tena milahatra intsony ny filanareo - ary niova ny fomba fiainanao vokatr'izany.
Ahoana ny fomba handrosoana - tsy mahatsiaro tena ho meloka!
Ka, efa namaky ny lisitry ny famantarana anay ianao ary tsy fantatrao izay hatao manaraka.
Angamba ianao nahatsapa fa tsy mandeha tsara intsony koa, na niova ny soatoavinao manokana ary tsy mifanaraka amin'ny soatoavin'ny namanao intsony izy ireo.
Na izany na tsy izany dia fotoana tokony hifindrana amin'ity fisakaizana ity.
Betsaka amintsika no mahatsiaro tena meloka fotsiny amin'ny fieritreretana ny hamarana ny fisakaizana, fa tsy mila sarotra araka ny mety hoeritreretintsika azy.
Ity ny fomba hihoarana ny finamanana nefa tsy mahatsiaro tena ho meloka.
1. Tadidio fa voajanahary izany.
Samy mitombo sy miova amin'ny fombantsika avy isika rehetra rehefa mihalehibe sy manana traikefa vaovao.
Ara-dalàna tanteraka ho antsika ny manova ny fotoana lanintsika ary tsy zavatra tsy tokony hampalahelo antsika izany.
Ny finamanana dia zavatra roa làlana, noho izany, amin'ny famaranana ny iray dia tsy lazainao hoe 100% izany noho ilay olona iray hafa - ekenao fa tsy mahazo mandeha intsony ianao ary izany dia vokatry ny fiovanao roa. .
Mifamatotra amin'ny alàlan'ny fanandramana ifampizarana izahay, ary raha tsy eo intsony ireo zavatra niainana ireo dia mety hihena koa ny fisakaizana.
Aza malahelo amin'izany - raha te hiaraka amin'ny olona mankao amin'ny yoga sy ny fahasalamana ianao dia mazava ho azy fa hihalehibe ireo namana izay vao nahamamo anao!
2. Mety hitovy ny zavatra tsapan'izy ireo.
Raha tsapanao fa nihoatra ny fisakaizana ianao dia tsara ny mandinika izay tsapan'ilay olona hafa.
Mety samy mihantona eo ianao satria mahatsiaro tena ho meloka loatra ka mamarana azy!
Ataovy marin-toetra ny zavatra tsapanao ary mety ho gaga anao izy ireo amin'ny fahatsapanao izany fomba izany.
Sarotra ny miaiky ny zavatra tsapanao momba ny namanao, ary tsy misy olona tia fifandonana na fahatsapana toa manelingelina olona iray izy ireo.
Na izany aza, zava-dehibe ny milaza ny marina sy mialoha ny zavatra tsapanao - ary tsy dia handratra izany amin'ny fotoana maharitra.
Azonao atao koa ny manampy azy ireo hahatsapa ny fomba izy ireo tena mahatsapa, ary manampy azy ireo hamaha olana iray izay efa nitolomany ihany koa.
Raha mazava aminao fa nihazakazaka ny finamanana dia fantatr'izy ireo angamba fa nisy zavatra niova koa.
Amin'ny fitondrana azy io sy ny fanaovana ny marina dia samy manao soa ho anao roa ianao.
3. Tsy manafoana ny zavatra nozarainao izany.
Ny dingana lehibe indrindra mankany amin'ny tsy fahatsapana ho meloka dia ny fanekena fa, rehefa tapitra ny fisakaizanareo dia tsy midika izany fa tsy nisy izany.
Matahotra izahay fa ny famaranana zavatra dia manimba ny dikany sy ny famafana ireo fahatsiarovana lehibe ananantsika amin'ny olona iray.
Aza mahatsapa ho meloka amin'ny famaranana ny fisakaizana, satria mbola tsara tarehy tamin'izany fotoana izany.
Tsy mety intsony izao - ary ara-dalàna sy ara-pahasalamana izany, ary tsara kokoa ho anao roa noho ny mitarika izay mety ho lasa zavatra misy poizina sy mahasosotra.
Ny finamanana dia miresaka ny marina - na dia mifarana aza.
Aza adino ny milaza ny zavatra tsapanao fa aza manompa.
Miezaha halemy fanahy araka izay tratranareo, hamaha izay mila famahana, ary avelao samy hizotra amin'ny fiainanareo ianareo avy eo!
Raha manana fotoan-tsarotra amin'izy ireo izy ireo dia manana olon-kafa hitodihana hanohana azy ireo, koa aza mahatsiaro ho meloka amin'izany.
Raha nahavita an'io hatreto ianao tao amin'ilay lahatsoratra, dia fantatrao ny tena fahatsapanao - araho izay lazain'ny fonao ary ataovy izay mahasoa anao roa.
Dingana 6 manakiana ny fananganana zavatra miaraka amin'ny sakaiza iray tezitra aminao
mamela ny zava-drehetra any aoriana ary manomboka
ahoana no hilazana amin'ny vehivavy fa tsara tarehy izy
sara lee henjana be tsaho
ny fomba hilaza raha misy hafa ankizivavy tia anao